Bit By Bit - Mass iskaashi - 5.4.2 PhotoCity
PhotoCity furfuraya masalooyin tayada xogta iyo sampling in ururinta xogta qaybiyey ah.
Shabakadaha Internetka sida Facebook Flickr iyo awood dadka in ay asxaabta iyo qoyska ay wadaagaan sawiro, laakiin sidoo kale waxay abuuraan repositories weyn of photos in loo isticmaali karo ujeedooyin kale. Tusaale ahaan, Agarwal et al. (2011) oo isku dayaysa in ay isticmaalaan photos si "Dhis Rome Maalin" adigoo isticmaalaya 150,000 sawirada Rome si ay u abuuraan dhiska a 3D ah ee magaalada. Waayo, goobaha dalxiiska sida Coliseum waxaa ka joogay sawirada filan online in ay soo saaraan daydo 3D (Jaantuska 5.10), laakiin tayada reconstructions ka mid ah ayaa ku koobneyn by xaqiiqada ah in photos ugu la geeyay laga soo qaaday aragtiyaha halyeey la mid ah, qaybo ka mid ah dhismayaasha ka unphotographed tago. Dheeraad ah, waayo qaybo badan oo magaalada, photos ma ku filan jiray la heli karo. Sidaas darteed, iyadoo la isticmaalayo xogta laga helay ka repositories sawir, waxaa suurto gal ahayn in ay ahayd cilinta oo dhan of Rome. Laakiin, waxa haddii iskaa wax la diiwaan yaabaa in la ururiyo ee photos lagama maarmaan ah in si dhab ah "Dhis Rome Maalin"?
Jaantuska 5.10: A dhiska 3-D ah Coliseum ka set badan oo ah images 2-D ka mashruuca "Building Rome Maalin". Saddexagal waxay matalaan goobaha laga sawirro ayaa lagu qaaday (Agarwal et al. 2011) .
Si aad u awood ururinta beegsaday of tiro badan oo sawiro, Kathleen Tuite iyo asxaabtii horumariyo PhotoCity, ciyaarta sawir-koombiyuutarka ah. Mid ka mid ah dhinaca quruxda badan ee PhotoCity waa in ay u soo jeestay hawsha laga yaabo caadi ah ee xog ururinta-koombiyuutarka photos-galay hawl-kulan sida ku lug kooxood, Daar, iyo calamada (Jaantuska 5.11). design ee PhotoCity sidoo kale wato furfuraya sampling iyo tayada xogta caqabadaha eBird iyo mashaariicda kale ee loo qaybiyey xog ururinta.
Jaantuska 5.11: PhotoCity jeestay hawsha laga yaabo caadi ah ururinta xogta (ie, photos uploading) oo waxay u leexatay galay ciyaar (Tuite et al. 2011) .
PhotoCity markii ugu horaysay la geeyay si ay awood u dhiska a 3D ah labada jaamacadood: Jaamacadda Cornell iyo University of Washington. Ciyaartoyda at campus kasta kormeeri laga yaabaa in xaaladda ay ku sugan model u dhiska ay campus ah. Markaas, waxay laga yaabaa dhibcood by uploading images in ay ballaariso model hadda. Tusaale ahaan, haddii model hadda ee Library Uris (at Cornell) ahaa mid aad u liiteen, ciyaaryahan laga yaabaa dhibcood by uploading sawiro cusub waxaa ka mid ah. Aadka, photos la uploaded waa in daboolaa la photos jira si ay u la ansixiyey karo, iyo tirada dhibcood ciyaaryahan helay ku salaysan yahay qadarka in ay sawir ku darayaa in model hadda. In dhamaadka, cilmi ay awoodaan in ay isticmaalaan kuwan photos uploaded in la abuuro xal sare daydo 3D dhismayaasha on labada xarumood (Jaantuska 5.12).
Jaantuska 5.12: kulan PhotoCity ayaa awood cilmi iyo ka qaybgalayaasha si ay u abuuraan daydo 3D oo tayo sare leh ee dhismayaasha la isticmaalayo sawiro uploaded by qayb-galayaasha (Tuite et al. 2011) .
design ee PhotoCity wato furfuraya laba dhibaato, xogta ansixinta iyo sampling. First, photos ayaa ansixiyey by iyaga ku habboon ka dhan ah sawiro hore oo jiray oo iyana kulan in photos hore jidka dib u photos abuur la uploaded by cilmi oo dhan. In si kale loo dhigo, sababtoo ah shaqo this dhisay-in, waxaa aad u adag, waayo, nidaamka si ay u aqbalaan xogta xun. Second, nidaamka dhaliyay dabiici ah tababar ka qaybgalayaasha si ay u ururiyaan ugu qiimaha-aan ugu-xogta ku haboon. Dhab ahaantii, halkan waa qaar ka mid ah xeeladaha in ciyaartoyda ku tilmaamay la isticmaalayo si ay u helaan dhibcaha ugu badan, taas oo u dhiganta ururinta xogta qiimaha badan (Tuite et al. 2011) :
"[Waxaan isku dayay in uu] qiyaasi waqtiga maalinta iyo iftiiminta in sawirada qaar ka mid ah lagu qaado, caawin lahaa hortago diidmada by ciyaarta. Iyada oo yidhi, maalmood daruuro madow ahaayeen ugu fiican by fog marka la tacaalida geesood maxaa yeelay barbardhigo yar ka caawiyay tiradaasi ciyaarta baxay joomateri ka sawirada aan ka. "
"Markii ay ahayd qoraxdu, waxaan adeegsadaa qaababka anti-eegmo aan camera ee ay u oggolaadaan inaan naftayda in ay qaataan photos halka socda agagaarka aag gaar ah. Tani waxay ogol yahay ii qaado sawiro tegayo halka aan lahayn si ay u joojiyaan aan boosaskooda. Sidoo kale bonus, yar dadku ay ku arkeen ii at "!
"Qaadashada sawiro badan oo ka mid ah dhismaha la camera 5 megapixel, ka dibna soo socda guriga in ay soo gudbiyaan, mararka qaarkood ilaa 5 Bilash on weekend biqil, wuxuu ahaa istaraatijiyad qabashada sawir hoose. Abaabulka photos on fayl drive adag dibadda by gobolka campus, dhismaha, ka dibna wejiga dhismaha bixiyo madaxda wanaagsan si uu u qaabeeyo Uploads. "
Hadallada ka soo qayb-galayaasha ayaa muujinaya, in marka ay ka dhiibteen ra'yigooda ku haboon, waxay noqon kartaa arrin khabiir ee ururinta xogta oo xiiso in cilmi.
Guud ahaan, mashruuca PhotoCity ayaa muujinaysa in sampling iyo tayada xogta aan dhibaato laga gudbi karin in xogta qaybinta ururinta. Dheeraad ah, waxa ay muujinaysaa in mashaariicda xog ururinta qaybiyey aan ku koobnayn hawlaha in dadku ay horeba si kasta samaynaya, sida daawashada shimbiraha. Iyada oo design saxda ah, iskaa wax lagu dhiiri karaa si aad u samayn waxyaabo kale.